घटनाक्रम • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
घटनाक्रम मा जुन 2022
हाल कुनै कार्यक्रमहरू निर्धारित छैनन्।
सेन्ट एन्थोनीको फ्ली मार्केट
डचटाउन चलचित्र रात: स्पेस जाम 2
शहरी शहर सेवा समुदाय उपहार
चेरोकी स्ट्रिट सीआईडी ​​सार्वजनिक बैठक
पेन्ट द टाउन: डचटाउन पेन्ट र सिप पार्टी
STL Dutchtown पैदल यात्रा हेर्नुहोस्
मार्क्वेट कम्युनिटी डे किकबल प्रतियोगिता
डचटाउन चलचित्र रात: भविष्यमा फिर्ता
DSCC सामुदायिक सशक्तीकरण समिति बैठक
प्रिय छिमेकीहरू: हालको सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटका कारण धेरै घटनाहरू स्थगित, पुनः शेड्यूल गरिएको वा रद्द गरिएको छ। कृपया घटना वेबसाइटको भ्रमण गर्नुहोस् वा सूचीबद्ध कार्यक्रमहरू तालिकाबद्ध रूपमा जानको लागि योजना बनाइएको छ कि भनेर हेर्न कार्यक्रम आयोजकहरूसँग जाँच गर्नुहोस्।
एक पटक चीजहरू सामान्यमा फर्किए पछि बाहिर निस्कन हाम्रा स्थानीय व्यवसायहरू र संगठनहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनु यो पहिलेको भन्दा अझ महत्वपूर्ण हुनेछ। कृपया सुरक्षित र स्वस्थ रहनुहोस्। हामी सकेसम्म छिटो ब्यापारमा फर्किने आशा गर्दछौं।
डचटाउन घटनाक्रम क्यालेन्डर भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यबाद! हाम्रो लक्ष्य तपाईका सबै छिमेकी बैठकहरू, कार्यक्रमहरू, वर्गहरू, बच्चाहरूको गतिविधिहरू, र अन्य घटनाहरूमा अद्यावधिक राख्नु हो डचटाउन, Gravois पार्क, समुद्री भिल्ला, सुखद पर्वत, र मा चेरोकी स्ट्रिट.
हामी निरन्तर नयाँ घटनाहरू थप्दै छौं, सुनिश्चित गर्नुहोस् यो पन्ना बूक्मार्क गर्नुहोस र प्राय: जाँच गर्नुहोस्।
यदि तपाईंको छिमेकमा घटना छ जुन तपाईं हामी साझा गर्न चाहानुहुन्छ, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस घटना को विवरण संग। निश्चित गर्नुहोस् कि मिति, समय, स्थान, आयोजक, र थप जानकारीको लागि लिंक उपलब्ध भए पछि।
घटनाक्रमको विवेकमा डचटाउन क्यालेन्डरमा थपियो डचटाउन STL.org र समय र स्रोत अनुमति को रूपमा।